सत्ताको आयु लम्बाउन देउवाले के–के गर्दै छन् ? - inaruwaonline.com
सत्ताको आयु लम्बाउन देउवाले के–के गर्दै छन् ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष ३०, २०७४ समय: ९:३१:४३
काठमाडौं, ३० पुस । सर्वोच्च अदालतले १९ भदौ २०७४ मा ७ माघ २०७४ भित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनको बाटो सहज गर्न बाध्यकारी आदेश (परमादेश) जारी ग-यो ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले केही दिनभित्रै प्रदेश प्रमुख र राजधानीबारे निर्णय लिने बताए । ‘प्रदेश प्रमुख र राजधानीबारे सरकारले छलफल गरिरहेको छ । छिट्टै सोबारे निर्णय हुन्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने ।राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।